Rasmi: Filimka Kesari iyo maalintiisa labaad ganacsiga uu sameeyay si wacan ayuu isku celiyay – Filimside.net
Rasmi: Filimka Kesari iyo maalintiisa labaad ganacsiga uu sameeyay si wacan ayuu isku celiyay
Superstar Akshay Kumar filimkiisa Kesari ayaa ganacsi wanaagsan sameeyay maalintiisa labaad wuxuuna keenay 17 Crore (Trade Figure) wuxuuna hoos u dhacay 20% marka lala bar bar dhigo Khamiiistii ganacsiga uu sameeyay waana arin aad u wanaagsan. Filimkan inta badan shalay wuxuu hoos u dhac ka sameeyay Mumbai iyo hareeraheeda asigoo Khamiistii halkaas ka keenay 7 Crore halka shalay uu ka keenay 4 Crore sababtana waxay tahay in feestada Holi saameyn ku yeelatay.
Balse filimka Kesari wuxuu ku wanaagsanaa shalay Waqooyiga Hindiya waxaana xusid mudan in 4.75 Crore uu ka keenay Delhi/UP maalintiisa labaad madaama filimkan fariintiisa Waqooyiga ku saleesan tahay sidoo kalena Kesari wuxuu ganacsigiisa ku wacnaa shalay gobolada CP Berar, Bihar iyo Mysore.
Sida shabakada Boxoffice India (BOI) soo daabacday filimka Kesari mudo labo maalmood ah wuxuu keenay 38 Crore (Trade Figure) waana ganacsi aad u wanaagsan waxaana hubaal ah Sabti iyo Axad inuu sameyn doono ganacsi ka badan midkii uu sameeyay Khamiis iyo Jimco taasi oo ka dhigeyso filimkan afartiisa maalmood ganacsi adag oo uu guu weyn ku gaaru karo inuu sameeyo.
Fadlan hoos kaga bogo Kesari iyo mudo labo maalmood ah ganacsiga uu sameeyay soona daabacday shabakada Boxoffice India (BOI):
Wadarta Guud – 38 Crore (Trade Figure)